Wasiirka Arimaha Dibada Kenya Oo Madaxweynaha Kenya ku Eedeeyey in ay Maareyweydey kiiska Badda – hareerley News
Wasiirka Arimaha Dibada Kenya Oo Madaxweynaha Kenya ku Eedeeyey in ay Maareyweydey kiiska Badda
(Neyrobi):-Sida uu daabacay wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxa uu haatan khilaaf xoogan oo ka dhashay kiiska Badda uu soo kala dhexgalay Madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo wasiiraddiisa arrimaha dibadda Monica Juma.
The Star oo soo xiganaya mas’uul ka tirsan madaxtooyada dalkaasi ayaa sheegay in Monica lagu heysto sida ay u wajahday arrinta Badda ee kala dhaxeysa Soomaaliya iyo sida ay ula dhaqantay dowladda Itoobiya.
Wargeysku waxa uu sidoo kale warbixintan ku sheegay in wasiirada lagu eedeeyey in ay magacawday diblomaasiyiin aan xirfad laheyn.
Sidoo kale waxyaabaha ugu culus ee lagu heysto waxaa ka mid ah in siyaasadda arrimaha dibadda ay ku fashilantay, islamarkaana ay Kenya u nugushay in labo jeer ay fagaarayaal caalami ah ku guul dareysato sanadka soo socda.
Eedeynta koowaad waa arrinta Badda oo Monica Juma lagu eedeeyay in qaab aan waafaqsaneyn diblomaasiyadda ula dhaqantay Soomaaliya, islamarkaana ay gaartay go’aanno culus, iyada oo aan la tashi la sameyn Madaxtooyada Kenya.
Midda labaad ayaa ah kursiga golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey oo sanadka dambe kula tartameyso dowladda Jabuuti.
Ugu dambeyn Juma ayaa lagu dhaliilay in ay si shakhsi ah u weerartay dalka Itoobiya oo saaxib la ah Kenya.
Dhinaca kale wargeyska ayaa qoray in sidoo kale lagu dhagan yahay xoghayaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi, Macharia Kamau.
Xoghayhaya ayaa isna lagu eedeeyay in uu dhawr jeer warbaahinta ka hadlay, islamarkaana uu ku dhawaaqay go’aanno aysan dowladdu raali ka ahayn .
The Star wuuu sheegay in aysan arrintan farxad gelin Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo labadaan qof u arka kuwa ku ciyaaray doorkii diblomaasiyadeed ee Kenya.
Arrintan ayaa ku soo aadeysa, iyadoo marar badan dowladda Kenya ay qaaday tallaabooyin ka dhan ah Soomaaliya oo uu haatan kala dhexeeyo muran dhinaca Badda ah, kaas oo ay dacwaddiisu ka furan tahay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ.
Ururka Dhalinyarada lambar_50 Oo Olole Nadaafadeed ka sameeyey Degmadaasi:(Sawiro)
Ururka Dhalinyarada Lambar50 ayaa maanta Olole Isxilqaan nadaafadeed ah ka sameeyay goobo muhiim u ah bulshada degmada Lambar50 ee Gobolka Shabeellada Hoose. Isxilqaankaan oo ah mid aad u weyn ayaa ahaa mid Ururka Dhalinyarada Lambar50 ay kula dagaalamayaan Geedka Raambow kaasoo sanadihii lasoo dhaafay fara kulul ku hayey Lambar50 iyo waliba Degaanada Geyiga Soomaliya. Goobaha […]
Ciidamada Booliska Soomaaliya Oo faahfaahino dheeraad ah ka bixiyey Khasaarahii ka dhashay Qarax ka dhacay Magaalada Muqdisho:-(Dhageyso)
Posted on July 4, 2020 July 4, 2020 Author Hareerley News
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha Qarxa oo Saakay lala beegsaday Waaxda ilaalada Canshuuraha Biriga oo ku taalla kasoo horjeedda Dekedda Muqdisho gaar ahaan Dhabarka dambe ee Xarunta degmada Xamarjajab. Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay in Qaraxaasi ay ku dhaawacmeen Shan ruux oo ka […]
Laamaha Amaanka Oo baadigoobya maleeshiyaad dil ka geytey magaalada Baladweyne .
Posted on March 15, 2020 March 15, 2020 Author Hareerley News
Gabaldhicii shalay Maleeshiyaad hubeysan ayaa waxaa ay dad shacab ah ku dileen inta u dhaxeyso degaanada burdhiile iyo kabxaaley oo ku yaalla duleedka Magaalada Bledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan Saddex qof oo la sheegay inay ahaayeen beeraley. Maleeshiyaadka ka dambeeyey dilkaasi ayayaa waxaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen,waxaana halkaasi gaarey Saraakiil ka tirsan Ciidamada […]
Xildhibaanada Beesha ku Matala Dowlada Federaalka Oo kulmey Ajendahoodase maku Jirey in ay Wax Ka Badalaan ?